China OEM PP Ukotini eshaweni ikhanda igobolondo isihlungi Core Umkhiqizi kanye Umthengisi | Xinpaez
OEM PP Ukotini eshaweni ikhanda igobolondo isihlungi Core
Isihlungi se-New Tech eshaweni - Umkhiqizo wesizukulwane sesibili, Unzima, ukuhlangana okusebenza kahle, Ukuvunyelwa okuphezulu
Ukuhluza okokugeza - Okwezimfanelo zamandla, iRust, iDust, iNemotode, i-ETC.
Impilo ende - Izinyanga ezi-3-6
I-OEM ODM - Amandla Wokukhiqiza Okuphezulu, imikhiqizo eyenziwe ngokwezifiso.
Izici: Ukuhluza amanzi
Ubuncane be-oda ubuningi: 1000
Ukuthi kufanele ukwamukele ukwenza ngokwezifiso: I-OEM, i-ODM yamukelekile
Usayizi: 70/106/124/118 MM
Isihlungi se-PP ukotini wokugeza Core
Ikhwalithi yezinto ezibonakalayo: i-polyester fiber (impahla ye-PP)
Isikhathi sokubuyiselwa: izinyanga ezi-3 kuye kwezi-6, kuya ngekhwalithi yamanzi, imvamisa i-10000L.
Umsebenzi: Hlunga ukungcola kwe-colloidal, udaka, ukugqwala, amaqanda ezinambuzane, ukungcola okungokwemvelo, njll
Isilinganiso sokuhlunga: 5 Micron
Isici sesihlungi se-PP ukotini senziwe nge-polypropylene resin njengempahla eluhlaza yokwenza imicu, ehlanganiswe yifayibha uqobo. Ukwakheka kwento yokuhlunga kuyisakhiwo esinemicu ewugqinsi engaphandle ewugqinsi, imicu yezingqimba ezingaphakathi ezincanyana, ungqimba olungaphandle oluxegayo, nongqimba oluqinile lwangaphakathi. Ukuhlunga kusuka ngaphandle kuye ngaphakathi, ukusondela kusendlalelo sangaphakathi sento yokuhlunga, okuncane ngosayizi wepore, kukhuphuka ukunemba kokuhlunga.
Lokhu kuhlunga kwe-gradient deep okuyingqayizivele sekwakhiwe umphumela wensalela yesihlungi esiyizinhlangothi ezintathu, okungaba ukwakheka okuningiliziwe nokujulile, ngomthamo omkhulu wokubamba ukungcola; I-PP incibilikisa into yokuhlunga eshisiwe inamandla, lapho itheko lokuhlunga kanye nengcindezi yokuphuma ingu-0.4Mpa, izinga lokugeleza kokuhlunga likhulu, futhi umehluko wengcindezi mncane, Umgogodla wokuhlunga awukhubazekile; Ihlanganisa ukuficwa komhlaba, okujulile, okukhohlakali nokuhle; Inezici zokugeleza okukhulu, ukumelana nokugqwala, umfutho ophakeme. Isetshenziselwa ukuvimba izinhlayiya ezinkulu ezifana nokugqwala, isihlabathi namaqanda ezinambuzane emanzini.
Ukukhuluma ngokufaka esikhundleni, Ngoba into yesihlungi se-PP ukotini ingeyesigaba sokuqala sesihlungi lapho ishawa, okungaphezulu kokungu-80% kokungcola kuzohlungwa kulesi sigaba, futhi ukungcola okuthe xaxa kuhlungwa, kulula ukuthi into yokuhlunga uvinjelwe. Ngakho-ke, impilo yento yokuhlunga ukotini ka-PP imfushane kakhulu. Isici sesihlungi singadinga ukufakwa esikhundleni sezinyanga ezingaphezu kwezimbili ezindaweni ezinekhwalithi yamanzi engeyinhle, futhi indawo ende kunazo zonke enekhwalithi engcono yamanzi ngeke yeqe izinyanga eziyisithupha. Ngakho-ke uma uthenga ikhanda lokugeza elinento yokuhlunga ukotini we-PP, ukuze uvikele ukungcoliswa kwesibili, kunconywa ukuthi ufake enye indawo yesihlungi njalo ezinyangeni ezi-3-6 noma kunjalo.
Ungahlulela kanjani ikhwalithi yento yokuhlunga ukotini we-PP
1. Sicela uhlole isisindo. Singalinganisa isisindo ngezandla zethu. Uma isisindo sisinda, ukuphakama kwesisindo sesihlungi kuphakama. Ikhwalithi nayo ingcono.
2. Sicela uhlole okubhaliwe. Lapho ukhetha okokuhlunga, kufanele ube nethemba ngezinto zento yokuhlunga. Umbala womgogodla wesihlungi ojwayelekile ufana futhi ubuso busicaba. Indawo yokuhlunga engezansi ayilingani ngombala futhi ayinakho ukuthungwa kahle.
3. Ukuncintisana. Ngokuvamile, ubukhulu be-fiber yesihlungi buphakama. Ukusebenza kangcono kokucindezelwa, ngcono ikhwalithi yomgogodla wesihlungi se-PP. Singakwazi ukwahlulela ngokuzizwa ngesandla, lapho umuzwa wesandla unamandla, ukusebenza kokucindezelwa kungcono.
Ngokuvamile sinikezela ngamasayizi amane, izinsizakalo ze-OEM ne-ODM ezitholakalayo. Akunandaba ukuthi udinga usayizi onjani,
singakwazi ukwenza ngezifiso. Njengamanje sinolayini bokukhiqiza abali-10 abasebenza ku-PP Core ngokukhishwa kwanyanga zonke kwezigidi ezi-2.
Langaphambilini I-cartridge yesihlungi se-OEM Aroma Vitamin C
Olandelayo: Ukugeza ngesandla okusha kwe-tech High Pressure
ikhanda leshawa elihle kakhulu
New Technology amaminerali zobumba eshaweni aphathwayo ...